ताराखोला १ भुस्कातमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न – ebaglung.com
ताराखोला १ भुस्कातमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
२०७६ असार २०, शुक्रबार २०:३८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ (ताराखोला) २०७६ असार २० । दलित सञ्जाल ताराखोला १ भुस्कातको आयोजनामा दलित सशक्तिकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ताराखोला गाउपालिका १ का वडा अध्यक्ष याम बहादुर श्रीसले राज्यले दलित समुदाय, जनजाति आदि लक्षित वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम अघि सारेकोले समुदायको चौतर्फि बिकासमा विशेष योगदान हुने बताए । राज्यले विभिन्न कार्यक्रम अघि सारे पछि परेको बर्ग क्षेत्र र समुदायलाइ माथि उठाउने लक्ष्य लिएकाले त्यो नीति कार्यक्रम सहि ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा उनको जोड थियो।
उनले ताराखोला गाउपालिकाले दलित समुदायका परम्परागत पेशा सुधार, भौतिक पुर्वाधार विकासमा पनि महत्व दिएको जनाउदै आउदा दिनमा अझै प्रभावकारी कार्यक्रम दिईने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रमको सहजिकरण गर्दै पत्रकार तथा अधिकारकर्मी सज्जन कुमार सिंहले नेपाली समाजमा बर्णश्रम देखि नै निश्चित समुदायलाइ विभेदमा पारिएको तीतो यथार्थ बताउदै समाजको विकास र उन्नतिका लागि दलित समुदायले रगत पसिना बगाए पनि वदलामा अपमान, विभेद उपहार पाएको बताए ।
विभेदित राज्यले दलितलाई नीति बनाएरै गरिव, निमुखा, थिचोमिचोमा पारेको हो । आफ्नी श्रीमती राख्ने सम्म अधिकार सम्म नपाएका किन गरिव नबनुन् ? शिक्षा र ज्ञान लिए जिब्रो काटिने, कानमा राङ हालि दिए पछि दलित किन शिक्षित भएनन् भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ ? सिंहको प्रश्न थियो । राज्यले विभेद र समान अवस्था नपुग्दासम्म दलित समुदायलाइ विशेष अधिकार दिएर हरेक क्षेत्रमा सहभागी बनाउनु पर्छ अधिकारकर्मी सिंहले भने ।
संविधानले निश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई लत्याएर लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन र सो सम्बन्धमा सर्बोच्चको आदेश खेदजनक र दलित उत्पिडित समुदायको विरुद्दमा छ । त्यस्तै वडा सचिव जित सुनारले दलित समुदायका आन्तरिक र बाह्य समस्या समाधान गर्न गैर दलित समुदायले विशेष पहलकदम लिनु पर्ने बताए । आफ्ना कमजोरी हटाउदै समयसापेक्ष दलित समुदाय पनि परिवर्तन हुनुपर्छ सुनारले भने ।
वडा १ का वडा प्रतिनिधि गौरी गुरुङ लगायतले बदलिदो परिस्थिति अनुसार सबै परिवर्तन भएर अघि बढ्न आग्रह गरे । आरान सुधार कार्यकम अन्तर्गत ताराखोला १ भुस्कात अशौजे टोल गोरुजुरेका देविलाल विश्वकर्मालाइ आरानमा आगो बाल्ने पंखा प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्जालका अध्यक्ष नर बहादुर विश्वकर्माको सभापतित्व ,सचिव भुमिराज विश्वकर्माको सञ्चालन र सदस्य खरिमाया विश्वकर्माको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो ।